मुस्ताङमा कालिगण्डकी थुनियो ! « Onlinetvnepal.com
मुस्ताङमा कालिगण्डकी थुनियो !
Published : 23 January, 2019 7:58 pm
मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा कालीगण्डकी नदी थुनिएको छ । बुधबार विहान १० बजे घरपझोङको वडा नं १ र २ को सीमानामा पर्ने छैरो भन्ने ठाउँमा किनारको २/३ सय मिटर जमिन भासिएर नदी थुनिएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिए।
भूकम्पले चिरा चिरा परेको पहाडमा सुख्खा पहिरो गएपछि माटो र रुख विरुवा झरेपछि नदी थुनिएको हो । नदीको एकापट्टिको किनार थुनिएर २ सय मिटर फराकिलो ताल बनेको छ भने अर्को तर्फको किनारबाट पानी बगिरहेको क्षेत्रीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र पोखराले जानकारी दिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्षेत्रीका अनुसार नदी थुनिएको ठाउँमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी पुगिसकेका छन् । उनीहरुले पहिरोसँगै झरेको रुखहरु हटाएपछि नदीले माटो बगाउन थालेको छ । ‘सुरक्षाकर्मीहरुले रुखविरुवा हटाएपछि पानी बग्न थालेको छ, त्यस्तो खतरा केही छैन’ उनले भने । नदीमा थुप्रिएको माटो पन्छाउन एक्साभेटर मगाइएको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्षेत्रीले जानकारी दिए ।